Garsoore aad u xun oo garsooraha loo qoondeeyay ... - AfriPulse - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS »Caqabadaha daran ee garsooraha loo gooyey ... - AfriPulse
Cunsuriyadaha dhabta ah ee garsooraha ayaa la furay ... - AfriPulse
La Liga ayaa isbuucaan ku kulantay deriskooda weyn ee u dhaxeysa Catalans iyo Colchoneros, islamarkaana inta badan dhacdooyinka kulamada xiisaha leh, isdaba marin la'aanta. Inkastoo uu ahaa dhibane Arthur oo aan laga tirtirin ninka uu jaalaha yahay, Diego Costa ayaa si xoog leh looga adkaaday garsooraha.
Diego Costa lama yaqaano inuu yahay ciyaaryahan ugu fiicnaanta fiican. Laakiin xiddiga reer Spain ayaa si aad ah uga dheereeyay xadka, Sabtidii, intii lagu gudajiray guul darradii Atlético-Barça ee Blaugrana (0-2). Dhab ahaantii waxaa ka careysnaa garsooraha, ciyaaryahanka reer Brazil ayaa dhaleeceynayay garsooraha.
Kaas oo ka kasbaday cayrinta.
"Daqiiqada 28e, ciyaaryahan Diego Costa waa la ceyriyay sababahan soo socda: wuu iiga yimid, waxaana ii sheegay ereyada soo socda" Waan ku qoslaa dhinaca hooyada! "".
"Waxa uu la hadlay isaga"
Weerarka ayaa sidoo kale qabtay gacanta rasmiga ah si uu uga hortago isaga oo ka digay Godin iyo Gimenez.
Ugu danbeyntii wuu caloolxumay daaficiisa Gerard Piqué, ciyaaryahanka sannadka ee 30 wuxuu xaqiijiyay inuu "naftiisa wax ka qabanayay" oo uusan ahayn garsooraha.
Ogow in Antoine Griezmann uu sidoo kale la kulmay qaladaad badan, isagoo intaa ku daray in uu gool ka dhaliyay horyaalka xilli ciyaareedkan. Xiddiga Faransiiska ah ee ku dhawaaqay Barcelona muddo dheer ayaa si caqli leh u cadeeyay dadweynaha Camp Nou.
Maxay ka dhigi kartaa inuu ka fekero fursadda uu u kobcin lahaa Catalonia ...
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore AFRIPULSE
Markii aan ogaanay Marco Verratti (Sebtember 2012) - VIDEO
PSG: Alex Sandro oo weli ku tartamaya Al-Khelaifi garoonka iskaleh - FOOT 01
Waa maxay sababta Macron uusan rabin Kamto madaxa madaxweynaha Cameroon - CAMEROON MAGAZINE
Galaxy 10G S5 heelal iPhone XS - VIDEO
Cameroon: Muwaadiniinta 3 350 Madadka loogu talagalay 20 May 2019